Ejipta · Desambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Desambra, 2009
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Desambra, 2009
Ejipta: Synagoga potika…Synanjavona
Fitantanam-pitondrana 26 Desambra 2009
Tamin'ny taona 2008 dia tojo trano fivavahana jiosy iray i Moftasa, synagoga zary lasa foiben-toeran'ny Antoko Demokraty (National Democratic Party) mitondra any Ejipta amin'izao fotoana. Ny tena mahavariana dia hoe ireto Ejiptiana namotika ny synagoga Magen Abraham ireto ihany no Ejiptiana tezitra tamin'ny fanapahan-kevitry Suisse tsy namela azy ireo hanangana...
Ejipta: Ho an'i Djamila Bouhired indray ity
Alzeria 21 Desambra 2009
Marary ilay mpitari-tolona Alzeriana Djamila Bouhired, 75 taona, ary nangataka tamin'ny fireneny sy ireo mpiray tanindrazana aminy hanampy azy amin'ny fitsaboana. Nahatezitra ireo mpitoraka bilaogy Ejiptiana izany izay mihevitra azy ho olona manana ny mahaizy azy sy olo-malaza eo amin'ny tontolo Arabo. Nanoratra tao amin'ny Egyptian Chronicles, Zeinobia no milaza...
Tontolo Arabo: hevitra nanoloana ny fandrarana minaret any Soisa
Alzeria 04 Desambra 2009
Nanaiky ny handrarana minaret vaovao [tilikambon'ny moske silamo] tamin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka ny alahady 29 Novambra lasa teo ny 57,5%-n'ny mpifidy Soisa, izay manori-dalana ho amin'ny fanitsiana ny Lalampanorenana. Any amin'ny fananganana tilikambo silamo vaovao – fa tsy ny moske – moa no iantefan'ity fitsapa-kevi-bahoaka ity fa tsy any amin'ny tilikambo...